I-smartphone yanamhlanje okanye ikhompyuter yeediliya: yeyiphi enamandla ngakumbi?
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-smartphone yanamhlanje okanye ikhompyuter yeediliya: yeyiphi enamandla ngakumbi?
I-smartphone yanamhlanje okanye ikhompyuter yeediliya: yeyiphi enamandla ngakumbi?
Ukuba uluhlobo lomntu othanda ukubukela iinkqubo zesayensi ezithandwayo kumabonwakude, ungabe uve ezinye zikaGqirha Michio Kaku & apos; iingcinga ezinomdla ngoko ikamva lisigcinele kona. Kule posi, nangona kunjalo, siza kuthatha uhambo olukhawulezayo sibuyele kwixesha elidlulileyo, sikhuthazwe yinto uKaku athi kuyo kwenye yeencwadi zakhe zamva nje:'Namhlanje, iselfowuni yakho inamandla ekhompyuter kunayo yonke i-NASA phaya ngonyaka we-1969, xa yayibeka oosomajukujuku ababini enyangeni.'Kubonakala kunzima ukukholelwa, siyazi, kodwa kuyinyani- isixhobo esiphethwe ngesandla esiphosa kuso iintaka ezihagwini sinamandla amakhulu ekhompyuter kunesixhobo soomatshini esisetyenziselwa ukukhokela ubugcisa kwindawo engaphandle kwiminyaka engama-45 eyadlulayo.
Isikhokelo sekhompyuter ye-Apollo, i-0.043MHz isantya sewotshi ye-IBM System / 360 Model 75 yeekhompyuter eziphambili, ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-3.5 yezigidi zeerandi lilinye ngelixesha zihlala kwindawo enkulu, bezisebenza kwi-NASA ngelo xesha. Ngamnye unokwenza imisebenzi eyikhulu lamawaka eyongeziweyo ngomzuzwana, kwaye inkumbulo yabo iyonke ikuluhlu lwe-megabyte. Ngokubhekisele kwi-70 yeepawundi Apollo Guidance Computer, eyayineModyuli ye-Apollo 11 Command, yayingumatshini owawuneememori ezingama-64 zeememori kwaye zisebenza kwi-0.043MHz. Xa uthelekisa, i-iPhone 5s, onokuyifaka ngokulula kuyo nayiphi na ipokotho, ine-CPU ebaleka ngesantya ukuya kuthi ga kwi-1.3GHz-eyaneleyo ukwenza ukubalwa kwezigidi zezibalo ngomzuzwana. Kwaye i-iPhone kunye ne-apos ye-1GB ye-RAM kufanelekile ukugcina ii-megabytes ezi-6 zekhowudi eyaphuhliswa yi-NASA ukubeka esweni ubume bezinto zayo zasemoyeni kunye noosomajukujuku ngo-1969.
I-Cray-1 supercomputer yagijima kwi-80MHz Kwiminyaka emininzi kamva, ngo-1975, i-supercomputer egama linguCray-1 yafika. Yayilicandelo lomatshini elisebenza kakuhle nelisoyikeka 'elabhabha' kwinqanaba le-80MHz. Ngelixa zisetyenziswa ngokubanzi kwiiprojekthi zesayensi, ezinje ngokulinganisa ukuhlangana kolwelo, elinye lala makhwenkwe mabi lanceda ukuhambisa i-CGI kwifilimu yokuqala yeTron, eyakhutshwa ngo-1982. Kodwa iCray-1 & apos; Ukusebenza ngomzuzwana (FLOPS) kuyahlekisa ngemilinganiselo yanamhlanje & apos; iyunithi yemizobo ngaphakathi kwe-iPhone 5s ivelisa malunga ne-76.8 GFLOPS-phantse kaliwaka ngaphezulu. Ngokuqinisekileyo, i-iPhone inokubonelela ngemizobo ye-3D ekhangeleka ngcono kuneTron & apos; s indawo yeLightcycle. Kwinqaku elihambelana nayo, ikhompyuter yeCray-2 yakhutshwa kwiminyaka eli-10 emva kweCray-1 kwaye yayiyeyona mishini yeekhompyuter ikhawulezayo ukuya kuthi ga ngo-1990. isesemva kwe-Apple iPhone, ubuncinci xa kufikwa kumanqanaba eGFLOPS.
Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka-okwangoku awulunganga njenge-smartphone enzulu iBlue Luhlaza yenye yeekhompyuter onokuba uvile ngayo. Ngowona matshini waziwa kakhulu ngokuphumelela ngokuchasene neentshatsheli zehlabathi chess uGarry Kasparov onamanqaku e-2: 1 kumdlalo we-6. Oko kwenzeka ngoMeyi 11, 1997, xa i-Deep Blue yayiyikhompyuter ye-259 enamandla kakhulu emhlabeni. Iqhayise ngomlinganiso wentsebenzo we-11.38 GFLOPS kwaye inokuvavanya indawo ezizigidi ezingama-200 kwibhodi yechess ngomzuzwana (nangona ingekakulungeli ukuqhuba i-Crysis, sicinga njalo). Namhlanje, kwiminyaka eli-17 kamva, i-ARM Mali-T628MP6 GPU ngaphakathi kwe-Exynos esekwe kwi-Samsung Galaxy S5 iziphumo ze-142 GFLOPS. Kwaye i-192-core GPU kwiTegra K1 SoC ivelisa incopho ebaluleke ngakumbi ye-364 GFLOPS. Ngokuqinisekileyo, ezi azinakuba ngaphezulu kweBlue Blue xa kusiziwa ekudlaleni i-chess, kodwa ngokubhekisele kubukrelekrele, amandla-okuqokelela amanani, ezi processor zemizobo zihamba zomelele.
Ewe, iteknoloji iyaqhubeka ngokuqinisekileyo, kwaye iyakwenza oko ngokukhawuleza okukhulu. Yintoni ethatha i-supercomputer ukubala namhlanje iya kuba sisiqwenga sekhekhe kwii-smartphones (okanye nantoni na eziguqukela kuyo) esiya kuthi siyisebenzise ngo-2020, njenganamhlanje iiapos zinee-smartphones ezinokuqhubekeka kwikhompyuter yeediliya. Into esiza kuthi siyityale la mandla okubala, nangona kunjalo, sisihloko esahlukileyo ngokupheleleyo. Zive ukhululekile ukuba wabelane ngoqikelelo lwakho phantsi kwezimvo!
izikhombisi: Ngeveki ngeKhompyutha , Cray-1 (Wikipedia), DigiBarn , Umbala oluhlaza okwesibhakabhaka (Wikipedia), Isixhobo seTom & apos; s Hardware
Uyenza njani into yokulungisa iphutha le-usb
Usetyenziso lwemozulu kagoogle lwe-android
ipad pro 11 ikesi ye-2020
Imephu yokugubungela inethiwekhi yeVerizon 5G: zeziphi izixeko ezigutyungelweyo?
Iapile kunye neapos; s i-iPhone 7 kunye ne-7 Plus ziyafumaneka kwi- $ 144 pop kunye nezicwangciso zezavenge (namhlanje kuphela)
Ungayikhubaza njani iKnockON (cofa kabini ukuvuka) kwi-LG G4, LG V10, nezinye ii-smartphones ze-LG
Isivumelwano: BestBuy sheds $ 200 off all iPhones- 16GB iPhone 6s down to $ 1, 64GB iPhone 6s Plus- $ 199.00
I-AT & T yokuthwala i-Samsung Gear S3 Frontier
I-Samsung kunye neapos zihlaziye i-femtocell Network Extender yeVerizon
Ukuphononongwa kwe-Samsung Galaxy Qaphela i-8 'yokugqibela' yokujonga okuvuzayo: umatshini wokuvelisa